Meydad hor leh oo laga helay duleedka degmada Balcad.
Tuesday March 06, 2018 - 19:27:22 in Wararka by Super Admin
Meydadka Ciidamada Burundi ee lagu dilay Kamiinkii Jumcihii ka dhacay duleedka degmada Balcad ayaa wali laga uruurinayaa deegaanada duurka ah ee ku teedsan wadada dheer ee isku xirta Balcad iyo Jowhar.
Ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa Burundi ayaa maanta isku faafiyay wadada si ay u baadigoobaan meydadka qaar oo ay dadka deegaanku soo sheegeen in urkooda ay ka harsan waayeen.
Inta la xaqiijiyay 2 meyd ayaa maanta laga soo helay duurka, waxaana la rumeysan yahay kuwa kale wali iney ku firixsan yihiin meelaha aan ka fogeyn goobihi dagaalka cuslaa uu ka dhacay.
Baabuur tobaneeyo ah oo dhammaantood basbeelay ayaa wali lagu arkayaa wadada, waxaana dadkii soo arkay ay sheegeen muuqaal laga argagaxo inuu ahaa sida gawaarida ciidamada Burundi ay goobta ugu gubteen.
Gaadiidka wali lagu arkayo goobtii dagaalka waxaa ka mid ah gaadiidka qafilan, booyado iyo tareello, waxaana qaar ka mid ah ku rarnaa firinjeerro iyo agab kale oo ay wateen ciidamadii goobta lagu halaagay.
Xoogaga Xarakada Al-Shabaab ayaa Jumcihii tagay waxey jiireen kolonyo Ciidamo Burundi ah oo ku socdaalayay duleedka degmada Balcad, halkaas oo lagu dilay in ka badan 20 askari, halka ay Mujaahidiintu gudaha u galeen degmada Balcad oo waqti ay gacanta ku hayyeen.